Top 5 Kem ủ tóc nào tốt mềm mượt hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Kem ủ tóc nào tốt mềm mượt hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ukusebenzisa i-shampoo ne-conditioner akwanele ukuthi izinwele zakho zibushelelezi futhi ziqine kusukela ngaphakathi. Uzodinga i-hair conditioner ukuze uthole ukunakekelwa okungcono kakhulu kwezinwele. Ngakho kukhona imigqa izinwele ze-cream ezifakiwe Iluphi uhlobo oluhle, okwenza izinwele zibushelelezi? Ake sifunde kabanzi ngalomugqa womkhiqizo ngesihloko esingezansi.
1 Uyini ukhilimu wezinwele?
2 Imibandela yokukhetha ukhilimu wezinwele ofanele
3 Top 5 ephumelela kakhulu soft and smooth hair conditioners
3.1 1. I-Fino Shiseido Hair Conditioner
3.2 2. Tresemme hair cream of America
3.3 3. I-Karseell Collagen Hair Cream
3.4 4. Nutri Care Fanola imaski yezinwele
3.5 5. I-Neutrogena Umswakama Kathathu Wokubuyisela Okujulile Imaski Yezinwele
4 Imiyalo yokuthi ungayisebenzisa kanjani i-hair conditioner ngempumelelo
Uyini ukhilimu wezinwele?
I-Hair conditioner ingumugqa wemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele enezakhi eziningi ezingangena ngokujulile kuma-cuticles wezinwele ukuze zinakekele izinwele kusukela empandeni kuya phezulu. Sebenzisa izinwele ze-cream ezifakiwe kuzosiza izinwele zakho zibe nempilo, zibushelelezi, zisize ukuvikela izinwele zakho kuma-agent ayingozi avela endaweni yangaphandle.
Akukhona lokho kuphela, ukusebenzisa lo mugqa womkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele kuphinde kukusize ukuthi ulungise umonakalo ojwayelekile wezinwele, wenze izinwele zibe namandla futhi zibushelelezi.
Imibandela yokukhetha ukhilimu wezinwele ofanele
Sebenzisa izinwele ze-cream ezifakiwe ikulethela izinzuzo eziningi ezinhle ezihlobene nezinwele. Kodwa-ke, phakathi kwenqwaba, ngisho namakhulu emikhiqizo efana nanamuhla, ungakhetha kanjani umugqa womkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele omuhle okulungele wena?
Khetha i-conditioner yezinwele ngokusekelwe esimweni sezinwele zakho. Isimo ngasinye sezinwele ezihlukene njengezinwele ezomile, izinwele ezinamafutha, izinwele ezivunyelwe, izinwele ezidayiwe, izinwele ezincanyana noma izinwele eziwugqinsi, njll. sidinga imigqa yaso yomkhiqizo ukuze sinakekele izinwele ezingcono kakhulu. Isibonelo, ngezinwele ezomile, kufanele ubeke phambili imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele equkethe ama-moisturizers amaningi ukuze wenze izinwele zithambile, zingahlangani futhi ziphukile. Phakathi naleso sikhathi, ngezinwele ezinamafutha, udinga imikhiqizo enokwakheka okuncane okunamandla okulawula amafutha ukuze unciphise isimo sezinwele ezinamafutha, ezinamathelayo, ezingakhululekile….
Khetha ukhilimu ngokusekelwe izithako zomkhiqizo. Ukukhethwa kwezithako zekhilimu nakho kudingeka kusekelwe esimweni sezinwele zakho. Kodwa-ke, kufanele ubeke phambili imikhiqizo equkethe i-collagen, i-keratin, amaprotheni, i-keravis, i-panthenol, i-argan oil kanye namafutha e-macadamia….
Khetha ukhilimu wokufukamela ngokusekelwe kuphunga lomkhiqizo: Ukuqinisekisa iphunga elimnandi kakhulu likakhilimu wokufukamela, kufanele ubeke phambili imikhiqizo enamakha emvelo njengephunga elimnandi, uwoyela kakhukhunathi, amafutha omnqumo noma uwoyela we-argan….
Khetha ukhilimu wezinwele wemvelaphi ecacile. Lokhu kuzosiza ukuqinisekisa ikhwalithi eyengeziwe, ukusebenza kahle nokuphepha kwalowo mkhiqizo kubasebenzisi. Ngakho-ke, kufanele unikeze okuthandayo ukukhetha ukhilimu wemikhiqizo ehloniphekile enemvelaphi ecacile nemvelaphi.
Top 5 ephumelela kakhulu soft and smooth hair conditioners
Njengoba kushiwo ngenhla, ama-conditioner wezinwele manje ahluke kakhulu ukuze uzikhethele ngokukhululekile. Kodwa-ke, ukukhuluma ngemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele yekhwalithi engcono kakhulu esebenza kahle kakhulu ezinweleni ezibushelelezi, i-top 5 ayikwazi ukushaywa indiva. izinwele ze-cream ezifakiwe Ngezansi kukhona okudume kakhulu.
1. I-Fino Shiseido Hair Conditioner
I-Fino Shiseido iwumugqa wemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele evela eJapan. Lo mkhiqizo ukhiqizwa kulayini wezobuchwepheshe wesimanje, othuthukisiwe futhi ozimele, ngakho uqinisekiswa kakhulu ngekhwalithi nokuphepha kwawo ngesikhathi sokusetshenziswa.
Izithako eziyinhloko kulo mugqa wekhilimu we-incubation zihlanganisa i-Glutamine, i-vitamin E nezinye izithako ezisebenzayo ezifana ne-Royal Jelly EX, i-PCA, i-Lipidure EX … Ngenxa yalokho, ukusebenzisa lo mkhiqizo kuzosiza ukunakekela izinwele zakho kusukela ekuqaleni. Kusukela empandeni kuya phezulu, ithambisa futhi ifake amanzi ukuze umucu ngamunye wezinwele zakho uthambe futhi ube nempilo.
Ngalo mugqa we-Fino Shiseido incubation cream, isimo se-tangles kanye neziphetho ezihlukanisiwe ezinweleni zakho nazo zizothuthukiswa ngokuphumelelayo. Ngesikhathi esifanayo, lesi simonyo sezinwele esivela eJapane sizosiza futhi ukususa ukungcola, ukungcola kanye ne-sebum eyeqile ezimpandeni zezinwele nesikhumba esinamafutha, okwenza izinwele zakho zihlanzeke kakhulu futhi zikhululeke kakhudlwana.
Intengo yesithenjwa: 219,000 VND / imbiza ka-230g.
2. Tresemme hair cream of America
Khuluma ngemigqa izinwele ze-cream ezifakiwe Njengamanje, umugqa womkhiqizo ongcono kakhulu akufanele neze uphuthelwe umugqa womkhiqizo we-Tresememe ovela e-US. Lo mkhiqizo okwamanje wethenjwa kakhulu ngabesifazane ekunakekeleni nasekubuyiseleni izinwele zabo ezilimele.
Ngokuyinhloko, izithako eziyinhloko kulo mugqa wekhilimu zifana neminye imigqa yomkhiqizo. Kodwa-ke, i-American Tresemme yengezwe ngamavithamini namaprotheni engeziwe kanye ne-Renew Complex… Ngenxa yalokho, izinwele zakho zizocwebezela, zi-bouncy, zibe silky futhi zigcwale amandla.
Ngalo mugqa womkhiqizo, ama-tangles akho kanye nokuphuka kuzothuthukiswa kakhulu. Ikakhulukazi, lo khilimu wokufaka incubation ubhekwa njengofaneleka kakhulu kumantombazane anezinwele ezidayiwe, izinwele eziphathwe ngamakhemikhali noma izinwele ezidinga ukunakekelwa ngokucophelela.
Intengo yesithenjwa: 85,000 VND / 180ml jar.
3. I-Karseell Collagen Hair Cream
I-Collagen Karseell iwumugqa wemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele evela e-Hong Kong. Kodwa-ke, lo mkhiqizo ukhiqizwa ngokwemigqa yobuchwepheshe besimanje evela e-Italy, ngakho-ke uqinisekiswa kakhulu ngokwekhwalithi kanye nokuphepha kubasebenzisi.
Lo mugqa wekhilimu wokunakekelwa kwezinwele uqukethe uhlu lwezithako zemvelo kakhulu ezinokuqukethwe okuphezulu okunomsoco njenge-macadamia nut, amafutha kakhukhunathi, amafutha we-avocado, i-vitamin E, ukhula lwasolwandle, isitashi segciwane likakolweni, i-collagen entsha, amaprotheni nezinye izithako ezisebenzayo. Ngenxa yalokho, i-tangle kanye nesimo esonakele sezinwele zakho sizobuyiselwa ngokuphumelelayo kusuka empandeni kuya kwesinye.
Ngesikhathi esifanayo, lo mugqa we-incubation cream uyasebenza kakhulu ekuvimbeleni ukulahlekelwa izinwele nokomisa, ukususa ngokuphumelelayo i-sebum namafutha amaningi ezinwele nasekhanda. Izakhi ezikulo mugqa wekhilimu we-incubation zizophinde zingene ekujuleni kwezimpande zezinwele, zenze ifilimu yokuzivikela ezinweleni, zisize ukunciphisa imiphumela yemvelo yangaphandle njengenqubo yokudaya, ukudaya, i-bleaching noma ukungcola, ukukhanya kwelanga.
I-Karseell Collagen Hair Cream Kubhekwa njengokufanelekile kakhulu kumantombazane anezinwele ezivunyelwe.
Intengo yesithenjwa: 220,000 VND/isikhwama esingu-50ml.
4. Nutri Care Fanola imaski yezinwele
I-Nutri Care Fanola nayo ingenye yemigqa yomkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele ezibuyisela ngempumelelo izinwele ezilimele. Lo mkhiqizo ukhiqizwa ngokusekelwe kubuchwepheshe obukhethekile obuvela e-Italy kodwa usudumile futhi waqashelwa Okudumile emazweni amaningi ahlukene emhlabeni jikelele, kusukela eYurophu kuya e-Asia.
Isithako esiyinhloko kulo khilimu wokufukamela i-colostrum extract. Ngaphandle kwalokho, ukhilimu wokufaka incubation uqukethe nobuningi bamaprotheni kanye nezinye izakhi eziningi ezibalulekile ezibhekwa njengeziphumelelayo ekunakekeleni nasekubuyiseleni izinwele kusukela ngaphakathi.
Ngakho-ke, ukusebenzisa lesi sikhilimu sezinwele zase-Italy kuzosiza izinwele zakho zibe yi-bouncy, zibushelelezi futhi ziqine. Ukoma nokuhlukaniswa kwezinwele kuzobuyiselwa ngokushesha ngenxa yezakhi eziqukethwe kulo mugqa womkhiqizo.
Intengo yesithenjwa: 230,000 VND / 100ml jar.
5. I-Neutrogena Umswakama Kathathu Wokubuyisela Okujulile Imaski Yezinwele
Ayidumile nje kuphela ngemikhiqizo yayo yokunakekela isikhumba, kodwa iNeutrogena nayo yaziwa ngemikhiqizo yayo yokunakekela izinwele esebenza ngempumelelo kakhulu. Enye yazo yi-Triple Moisture Deep Recovery Hair Mask.
Lo mkhiqizo uye wabhekana nokukhiqizwa nokuhlolwa okuqinile, futhi uhlolwe kahle ukusebenza nokuphepha ngesikhathi sokusetshenziswa. Ngakho-ke, ngalesi simo sezinwele, ungaqiniseka, asikho isidingo sokukhathazeka ngezinkinga zokucasuka esikhumbeni nasezinwele.
Izithako eziyinhloko kulo mugqa we-incubation cream yizo zonke izingcaphuno zemvelo namafutha abalulekile. Okuvelele phakathi kwazo amafutha e-almond, amafutha omnqumo, amafutha embewu ye-Meadowfoam nezinye izithako eziningi ezibalulekile ezisebenzayo, okusiza ekunakekeleni izinwele zakho kusukela ngaphakathi nangaphandle.
Umphumela olethwa lo khilimu wokuphuza ezinweleni zakho awugcini ekubuyiselweni kwezinwele ezipholile, eziphukile. Ngaphezu kwalokho, Imaski Yezinwele Yokubuyisela Umswakama Kathathu Ibuye iphumelele kakhulu ekuvimbeleni lo monakalo, ukusiza ukuhlinzeka ngemisoco yezinwele ezinempilo kusuka ekujuleni. Ngenxa yalokho, izinwele zakho zizoba zikhulu, zibushelelezi, zikusize uqiniseke ngokwengeziwe futhi uvelele.
Intengo yesithenjwa: 290,000 VND / 150ml jar.
Imiyalo yokuthi ungayisebenzisa kanjani i-hair conditioner ngempumelelo
Ukukhetha i-conditioner engcono kakhulu nefaneleka kakhulu yezinwele zakho kubaluleke kakhulu. Kodwa-ke, esinye isici esibaluleke ngokulinganayo ukusiza ukuphumelela komugqa wekhilimu kukhuliswa ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Ngakho kanjani ukusebenzisa izinwele ze-cream ezifakiwe Iyiphi ephumelela kakhulu?
Isinyathelo 1: Okokuqala, hlanza izinwele zakho nekhanda lakho nge-shampoo kanye ne-conditioner. Okulandelayo, sebenzisa ithawula elithambile likakotini ukuze usule amanzi amaningi ezinweleni zakho, ugcine izinwele zakho zinomswakama owanele. Qaphela ukuthi ungawagcoyi amathawula kakotini ezinweleni zakho ukugwema ukuthi izinwele zakho zilimale nakakhulu.
Isinyathelo sesi-2: Thatha inani elanele lokhilimu ozolifaka ezinweleni zakho ngenkathi zisamanzi, hlikihla ngobumnene ukuze uqinisekise ukuthi imisoco ekhilimu ingena ngobumnene nangempumelelo esikhumbeni nasezinweleni zakho. Ukubhucunga izinwele zakho, ungasebenzisa iminwe yakho noma usebenzise ikamu.
Isinyathelo sesi-3: Nethezeka imizuzu eyi-10. Lesi sikhathi sanele nje ukuthi imisoco ekhilimu ingene ngokugcwele ezinweleni zakho. Ngaphezu kwalokho, uma izinwele zakho zonakaliswe kakhulu, lesi sikhathi sokulinda singandiswa sibe yimizuzu engu-15-20. Ngokuphambene nalokho, uma izinwele zakho ziphilile futhi zivamile, udinga nje ukulinda cishe imizuzu engu-3-5 kwanele.
Isinyathelo sesi-4: Sebenzisa amanzi abandayo ukugeza izinwele zakho, ukusiza ukugeza noma yimuphi ukhilimu osele kuwo.
Isinyathelo sesi-5: Yomisa izinwele zakho noma uzivumele zome ngokwemvelo, gwema ukusebenzisa ithawula likakotini ukuze uzihlikihle noma zizolimala kakhulu futhi zivame ukuphuka.
Nazi eziphezulu ezingu-5 izinwele ze-cream ezifakiwe okungcono kakhulu namuhla. Ngalawa ma-incubators, izinwele zakho zizonakekelwa ngendlela ebanzi, zenze zibe namandla, zithambe futhi zibushelelezi ukusuka empandeni kuya kwesinye.
Cài đặt mã PIN cho Sim trên iPhone và Android để tăng bảo mật cực tốt | Muasalebang